Nhau - Nongedzo kuMotokari Yemagumbo Saizi: Zvinokosha chaizvo
Nongedzo kuMotokari Yemavhiri Saizi: Izvo zvakakosha chaizvo
Zvichitaurwa zviri nyore, akakura matai ako, ndipo paunowedzera kubata mota yako mumugwagwa. Sezvo hupamhi hwetairi hunowedzera, inogona kuvhara yakawanda yemugwagwa pamusoro penzvimbo.
Madhiraivha mazhinji haafungi nezvehukuru hwemavhiri awo nematai kunze kwekushongedza. Asi, kukura kwevhiri - uye saizi yematairi iwe yawaisa pavari - nyaya. Kushandisa matai asiri iwo kunogona kudhura uye dzimwe nguva kungava nenjodzi.
Kukura kweTire Kune Basa Chaizvo?
Zvichitaurwa zviri nyore, rakakura tai rako, iyo yakawanda yekubata iyo mota yako ine mumugwagwa. Sezvo hupamhi hwetairi hunowedzera, inovhara yakawanda pamusoro penzvimbo mumugwagwa. Zvinoenderana neSee Cars, kuwedzera uku kwekubatana nepavheji kunopa mota yako zvakanyanya kubatirira, ichiwedzera kubata kwayo uye kugona kufambisa.
Saka, kukura kwetaya kune basa here? Mhinduro pfupi ndeyekuti: Hongu. Asi kukura kwevhiri kunokosha here? Zvinoenderana.
Mavhiri nematairi haasi mazwi anochinjika. Matai chikamu chekumisikidza vhiri. Semuenzaniso, mota yako ine saizi yakatarwa yemarimu, asi iwe unogona kutenga saizi dzakasiyana dzematairi kuti akwane iwo marimu, chero bedzi pakati pematairi iri saizi chaiyo. Izvo zvataurwa, mota ine marimu mahombe inowanzo gona kukwana matayi akakura kupfuura dzimwe mota.
Makuru Makuru = Mabhiri Makuru
Pakazara, matai akakura uye mavhiri ari nani pakuwedzera kuteedzera kwemotokari yako. Nekudaro, matai mahombe zvakare anoreva akakurisa mateki ematengo, sekureva kweVatengi Reports. Edza kutsvaga yakanakisa chiyero pakati pehukuru uye bhajeti rako. Kana iwe ukasarudza mavhiri akakura paunotenga mota yako, ungangotadza kuona uku kukwira kwemutengo pakutanga, asi kana uchifanira kutsiva mavhiri makuru nematai, iwe unenge uine mutengo wakakwira wekutsiva pane mumwe munhu anotyaira mota ane zvidiki mavhiri.
Paunenge iwe wasarudza saizi saizi yemota yako, iwe unozoda kunamira neiyo saizi kana iwe ukatenga zvinotsiva. Icho chikonzero cheichi ndechekuti rakasiyana saizi vhiri rinogona kuvhiringidza yako yekumhanyisa uye kunyange kukonzera kukuvara kune yako mota anti-kuki braking masystem uye kugadzikana system calibrations. Izvi zvinoshanda kuchinjira kune ese ari maviri madiki uye makuru matai. Kuchinjira kumatai mahombe nehurefu hwedivi husina kukodzera kunogona kukonzera kukuvara kwekumiswa kwemotokari yako, mavhiri, uye matai pachawo, uye zvinogona kumhanyisa njodzi yekuverengwa kwemasipimita zvisiri izvo.
Nekudaro, kana iwe ukafananidza hombe-dhayamita saizi yemavhiri kudzika-yepasirese matai saizi, yako yekumhanyisa uye odometer haifanire kuona chero shanduko. Iyi setup inoreva kuti matai ako ane mapfupi emadziro, zvinoreva kuti akasimba mativi emadziro, uye mukana wakakwira wekuputika kana ukarova pothole.
Paunotsiva matai ako, edza kunamira neiyo mhando uye saizi, sekusanganisa uye kuenzanisa kunosiya mota yako netambo dzakasiyana dzematai, izvo zvinogona kukonzera kutenderera uye kudzora kurasikirwa.
Matipi Ekutenga maRim matsva nematai
Wepakati mutyairi anogona kusaziva chaizvo zvavari kutsvaga pavanotenga matai matsva, asi sekureba sekunge iwe uchichengeta mashoma mashoma akakosha mirawo mupfungwa, kutsiva matai nemarimu kuri nyore.
Maitiro Ekuverenga Tire Masayizi
Paunotsvaga matai matsva, unosangana nemazita emasaizi akadai se235 / 75R15 kana P215 / 65R15. Aya mavara anogona kuvhiringidza kana usina chokwadi chekuaverenga, asi kana uchinge wadzidza mutauro wematai, anova akajeka.
Kurutivi rworuboshwe rwechiratidzo chekupaza, iwe unowana matatu manhamba uye dzimwe nguva tsamba. Iwo manhamba anomiririra kukura kwematai, mumamirimita, kubva padivi kusvika kudivi. Iyo yakakura iri nhamba iri, iyo inowedzera nzira iyo tai inobata.
Kana iwe ukaona tsamba kuruboshwe, zvinoreva rudzi rwematai. Tsamba dzaungaona ndeidzi:
"P," yevatyairi vemota vhiri. Tsamba iyi zvakare inokuzivisa iwe kuti vhiri rakagadzirwa kuzadzisa zviyero muUnited States. Kana pasina tsamba, zvinoreva kuti yakaitwa kuti isangane nemitemo yeEurope. Iyo mhando mbiri dzine akasiyana mutoro kugona.
"LT," yerori remotokari. Masayizi eTire anotanga nemavara aya anoitirwa kushandiswa kumatiraki akareruka. Vachave nepamusoro psi kurudziro yekutora zvirinani kumatrailer nemitoro inorema.
"ST," yetrailer yakakosha. Ukuru hwematairi ane mavara aya ndee mavhiri etrailer chete.
Tichishandisa P215 / 65R15-saizi vhiri semuenzaniso, tinogona kutaura kuti tai ndere mota yemutakurwi uye ine 215-millimeter upamhi.
Kurutivi rwerudyi rwechiratidzo chekupaza, iwe unowana maviri manhamba, tsamba, uye mamwe maviri manhamba. Iyo yekutanga seti yenhamba inomiririra iyo chikamu chikamu chehurefu hwetairi nehupamhi hwayo. Mumuenzaniso wedu P215 / 65R15, iwo manhamba ari makumi matanhatu neshanu, zvinoreva kuti kureba kwetayire padivi ndeye 65% yakakura sekufara kwetaya. Tsamba yepakati iri kurudyi kweslash inokuudza nezvenzira yekuvaka tai uye inowanzove "R," kana radial. Izvi zvinoreva kuti zvidimbu zvetaya zvinomhanya zvakanyanya pariri.
Nhamba yekupedzisira yakakosha, sezvo ichikuudza saizi vhiri rinokwana. Mumuenzaniso wedu, nhamba iyi gumi neshanu, zvinoreva kuti vhiri rinokwana vhiri rine dhayamita gumi neshanu.
Rayone anotsanangura kuti dzimwe nguva, zvinogamuchirwa kuve nematairi akasiyana akasiyana uye marimu emavhiri ekumberi nekumashure, anonzi matai akadzedzereka. Iwe unowanzoona izvi nemhasuru mota, senge iyo Mustang, Challenger, uye Camaro. Chikonzero ichi chinoita ndechekuti mavhiri ekumashure haafanire kutendeuka sezvinoita mavhiri epamberi.
Iyo yakakurisa rim yako, iyo yakaoma uye inodhura kutenga matsva matai ichave. Ukangotanga kushandisa matai makuru, unogona kuona kuti vashoma chete vevagadziri vematai ndivo vanoita saizi yako. Nekudaro, dambudziko iri rinowanzo dzivirirwa neavhareji mota mumotokari dzemotokari.
Makuru mavhiri kazhinji anoreva akaonda matayi. Matai acho anofanira kunge ari madiki kuti akwane mukati megumbo rako zvakanaka. Kana rakatetepa tai rako, parinotadza kukwanisa kufamba mumigwagwa yakasindimara nemakomba, izvo zvinogona kukonzeresa kuputika.
Mavhiri uye matai akakosha zvikamu zvemota yako. Kunyangwe izvo zvingaite senge zviri pachena, vatyairi vazhinji havape pfungwa yechipiri kumatai avanosarudzira mota, izvo zvinogona kutungamira kumatambudziko mazhinji asingadiwe. Ziva mota yako uye dzivisa kuita zvakakomba matai zvikanganiso kuti uone kuti mavhiri ako akachengeteka uye arikupa mota yako akanakisa matanho ekubatisa anogona.
Post nguva: Aug-06-2021